Kọ Ohi Ọdịnaya na Adsense dị ka mmebi DMCA | Martech Zone
Monday, July 21, 2008 Satọde, 25 Juun 2016 Douglas Karr
Ekpebiela m iso onye mbipụta na-ebuso nri m agha ma na-ahapụ ọdịnaya m n'okpuru aha ya na weebụsaịtị. Ọ na-agba mgbasa ozi ma na-enweta ego site na ọdịnaya saịtị m ike gwụrụ m. Ndị nkwusa, gụnyere ndị na-ede blọgụ, nwere ikike n'okpuru Iwu Millennium Copyright Act.
Kedu ihe bụ DMCA?
Digital Millennium Copyright Act (DMCA) bụ iwu United States (etinyere iwu na Ọktọba 1998) nke mere ka nchedo iwu kwadoro ikike ikike ọgụgụ isi nke na-ekpuchighị na mbụ US Copyright Act Mmelite ndị a dị mkpa iji nweta teknụzụ nkwukọrịta mgbasa ozi ọhụụ, ọkachasị maka ịntanetị. Mgbanwe ndị ahụ gbanwere iwu nwebisiinka US nke kwekọrịtara na World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty na WIPO Performances Phonogram Treaty.
Na nyochaa na saịtị ndị bipụtara, achọpụtara m na ha enwetala ndepụta ahụ site na ndepụta RSS m. Nke a bụ imebi iwu Usoro Ọrụ nke FeedBurner.
Karịsịa, onye nkwusa a na-agba mgbasa ozi Adsense. Izu ohi ọdịnaya na mgbasa ozi Adsense na-agba ọsọ bụ a mmebi iwu nke Usoro Ọrụ Google.
M kpọtụụrụ Adsense ma kọọrọ nsogbu ahụ, ma ezutela m ihe ndị ọzọ iji mezue. Ebe nrụọrụ Adsense na-akọwa:
Iji mee ka ikike anyị nwee ike ịhazi arịrịọ gị, biko jiri usoro ndị a (gụnyere nọmba ngalaba):
Chọpụta nke ọma ọrụ nwebisiinka nke ị kwenyere na ọ megidere. Ọmụmaatụ, “The nwebiisinka ọrụ na esemokwu bụ ederede na-egosi na http://www.legal.com/legal_page.html.”
Chọpụta ihe ị na-ekwu na ọ na-emebi ọrụ nwebisiinka edepụtara na ihe # 1 dị n'elu. Must ga-amata peeji nke ọ bụla ebubo na ọ nwere ihe mebiri emebi site na ịnye URL ya.
Nye ozi zuru oke iji nye Google ohere ịkpọtụrụ gị (adreesị ozi-e kachasị mma).
Gụnye okwu na-esonụ: “Enwere m ezigbo okwukwe na ọ bụ onye nwe ikike nwebisiinka, ndị nnọchi anya ya, ma ọ bụ iwu nyere iji ojiji nke ihe nwebisiinka ahụ a kọwara n'elu na websaịtị a na-ebo ebubo imebi iwu.
Gụnye okwu na-esonụ: “A Iụrụ m iyi, n’okpuru ntaramahụhụ maka ị ,ụ iyi ụgha, na ozi dị na ọkwa ahụ ziri ezi yana na abụ m onye nwebisiinka ma ọ bụ nwee ikike ime n’aha ndị
Onye nwere ikike pụrụ iche nke a na-ebo ebubo imebi iwu. ”
Ziga nkwukọrịta ederede na adreesị na-esonụ:
Gaa: Nkwado AdSense, DMCA mkpesa
1600 Egwuregwu Amphitheater Parkway
Ugwu Mountain CA 94043
Ma ọ bụ Faksị na:
(650) 618-8507, Attn: AdSense Nkwado, mkpesa DMCA
Akwụkwọ a ga-abụ na akwụkwọ ozi taa!
Tags: AdSensenwebisiinkadmcadmca mkpesadmca mkpesaGoogle AdSense
Kwesịrị Ndị na-ede blọgụ idozi mmejọ ha?
Jul 21, 2008 na 12:57 PM
Nke ahụ bụ ezigbo echiche. Enweela m splogger na-ebuli ọdịnaya m ruo nwa oge na post gị kpaliri m ịme ihe. O yighị ka ha na-eji ya maka itinye ego, kama ọ bụ ihe a na-eji emegharị okporo ụzọ gaa na saịtị ha. Gah.
Jul 21, 2008 na 4:33 PM
Ndo nụ banyere Doug a, nwee olile anya na ị gaziiri ya.
Barbara Ling, Onye Nchịkwa Virtual
Jul 21, 2008 na 5:07 PM
Kachasị mma nke ịhazi ụdị a !! Ana m ekele gị maka ịdị na-arụ ọrụ.
Echiche kacha mma, Barbara
Jul 12, 2010 na 11: 27 AM
Nke a na-enye aka.
Nwere ike ịme mkpesa na ụlọ ọrụ na-eweta mba.
Mee ka mmadụ na-ezuru ọdịnaya m yana ndị asọmpi na ọtụtụ blọọgụ na-abụghị nke azụmahịa na ụlọ ọrụ m.
Nwoke a nwere netwọkụ nke ya nke ọtụtụ saịtị ndị ọzọ iri na abụọ.
Ebe ọ bụ na o nwere ọdịnaya anyị niile gbasara ụkwara ume ọkụ na nfụkasị yana ọdịnaya niile sitere na blọọgụ ndị ọzọ, ọ na-abụkarị karịa anyị maka ọkwa nke anyị.
O butere ọgba aghara site n'aka ndị mmadụ na-achọ ịlaghachi na post.
Ana m etinye Google akwụkwọ mkpesa ahụ ugbu a.